Yuniversitiilee Keessatti Dararaan Barattoota Oromoo Irra Gahu Hammaataa Jira. « QEERROO
Yuniversitiilee Keessatti Dararaan Barattoota Oromoo Irra Gahu Hammaataa Jira.
June 19, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Waxabajjii 19,2017/ Bara kana ji’oota jaha dura, Mooraa Wallo Yuunibarsiitii keessatti sababa Oromummaa isaanii qofaaf ilmaan habashaa keessattuu TPLF barattoota Oromoo irratti lola hamaa banuu isaanii gabaasaalee keenya ji’oota muraasaan ibsaa turre.
Akka gabaasi Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaqqabe ibsutti tibba sana barattoota Oromoo shantamaa ol mana hidhaa tursuun dararaa hamaan irra dhaqaabe. Kana cinatti gaafuma sana barataa, Nagarii Gaaromaa dhalootaan Horro Guduruu Wallaggaa kan ta’e barattoota cinaa butamee reebicha hamaa bakka namni hinarginetti erga irra geessisanii booda du’e jedhanii mooraa keessatti halkan konkolaataa waraanaan deebisanii gatanii sana irratti deebisaniis sobee ciisa jechuun akka fayye hubatuun lola biraa irratti banuuf gaafa yaalaan manni yaalaa magaalichaa harkatti busheessee jedhu.
Haalli fayyaa Nagarii Gaaromaa gaafa akka malee ulfaataa deemu, gara manasaatti galee akka yaalamu ta’ee jedhu barattoonni bilbilaan nuuf himan. Akkuma kana guyyuma sana waldhabdee uumamte sababeeffachuun barattuu Raahel Daggafuu barattuu Biology irraa barana eebbifamuuf
turte mana hidhaa bultii afur erga tursiisaniin booda sababaa Oromoo qofaaf duulli hamaan irratti gaggeeffamee nageenyasheellee hanga sarbanitti gahaa turanii jedhu. Adeemsuma kanaan naannichatti hawwaasni argamu meeshaa qabuun barataa Oromoo maratti duula banuun guyyaa sana barataan Oromoo danuun akka miidhamellee guyyaa dubbii sana gabaasnee turre.
Har’as barattoota danuu mana barnootaarraa ari’anii jiruu jedhu. Haaluuma Kanaan
Barattuu Raahel Daggafuu Biology irraa kan eebbaaf qophaahaa jirtu eebba bultii 97 gale irratti displiniin moorichaa waggaa lamaaf adabee jira.
Barataa Nagarii Gaaromaa hanga ammaa nageenyisaa hunkuramee barnootarraas ala ta’ee jira.
Darajjee Firrisaa Aagaa;w/lixaa, b/taa biology wagga Murtii waggaa laamaan manni seeraas manni barumsaas adabe
Nagaraa Bultii Jaallataa;w/lixaa, b/taa statics waggaa 1ffaa. Waggaa lamaaf mana barumsaarra
adabame, akkasuma manni seeraas murtii haqaa malee mitti murteesse
Geetuu laggasaa Dallanaa;Buuno Beddelle,b/taa Geology waggaa 1ffaa. Waggaa lamaaf adabame.
Naasir xaahir Abdullaahi;Arsii Bahaa,b/taa Geography&Environmental studies waggaa1ffaa. Waggaa lamaaf adabame.
Adabbii hamaa barattoota Oromoo kanarratti fudhatame cinatti, bilisummaan akka barataan Oromoo hin baranne doorsifni hamaan ammallee barattoora Oromoorra jiraachuu eeruun,
Ilmaan habashaa duula jibbiinsaa barattoota kanarratti fudhatan keessaa namani afur qoftu tibba sana hidhamee ture, har’a garuu barnoota isaanii haalaan hordofataa jiruu jechuun miira gaddaan nuuf
« Godina Arsii Aanaa Jaajjuu Keessatti Qeerroon Bilisummaa Aanichaa Kijiba Wayyaanee Dura Dhaabbatan.
ONN waxabajjii 17_2017 QOPHII ADDAA _ Dhimma Oromia irraattii »